Kutheni imizimba yemiyalezo efunyenweyo ingenanto? - DataNumen
Xa usebenzisa DataNumen Outlook Repair kwaye DataNumen Exchange RecoveryNgamanye amaxesha unokufumana imizimba yemiyalezo efunyenweyo ingenanto.
Zininzi izizathu ezinokubangela ingxaki:
1. Ezinye iinkqubo zokulwa intsholongwane zinokubangela ingxaki. Umzekelo, sifumene iingxelo ezivela kubathengi ukuba i-Eset izakubangela ingxaki.
Isixazululo: Vala inkqubo yokulwa intsholongwane kwaye uzame ukubuyisela kwakhona.
2. Ukuba ifomathi yefayile ye-PST ikwifomathi yakudala ye-Outlook 97-2002, emva koko ifomathi yakudala inesithintelo sosayizi we-2GB, ngalo lonke ixesha idatha efunyenweyo ifikelela kulo mda, umyalezo ofunyenweyo awuyi kuba nalutho.
Isisombululo: Guqula indawo ekuya kuyo yefomathi yePST kwifomathi entsha ye-Outlook 2003-2019 endaweni yefomathi yakudala ye-Outlook 97-2002. Ifomathi entsha ayinasithintelo sosayizi we-2GB ukuze isombulule ingxaki.
3. Ukuba umthombo wakho PST okanye OST ifayile yonakele kakubi kwaye idatha yemizimba yomyalezo lost ngokusisigxina, emva koko uya kubona imizimba engenanto kweminye imiyalezo efunyenweyo.
Isisombululo: Kuba idatha yi-lost ngokusisigxina, azikho iindlela zokuphinda uzifumane.
Ndifomatha idrayivu yam. Ndingaqhubeka nokufumana idatha yam ye-Outlook?Yintoni umahluko phakathi DataNumen Outlook Repair kwaye DataNumen Outlook Drive Recovery?